यी १५ कारण जसले गर्दा हामी नेपालीलाई को-रोनाले छुन सक्दैन।यस्ता बानी छोड्दै नछोड्नुहोस्। – Ramailo Sandesh
यी १५ कारण जसले गर्दा हामी नेपालीलाई को- रोनाले मा`र्न सक्दैन ! को- रोना भा,इरसको प्रवेश नेपालमा ज-टिल बनिरहेकाे छ । विश्वभर को- रोना सं,क्रमणको महामारी फैलिरहेको बेला नेपालमा पनि यसविरुद्ध स’र्तकता अपनाइन थालेको छ । यसको जो’खिम भन्दा सर्वत्र ह’ल्लाले मानिसहरुमा त्रा’ स बढाएको छ । हामी नेपालीलाई यी निम्न कारणले गर्दा काे-राेनाले ज्या- न लिन गार-हाे पर्नसक्छ:-
१) कागती पानी, अमिलो, भुँइकटहर, स्याउ, दालचिनी, अदुवा , खुर्सानी, मरिच, लसुन , अमला, सित्तलचिनी आदिले रगत पातलो बनाउँछ । को- रोना संक्रमणमा हुने स्ट्रोक, थ्रोम्बोसिस आदिमा हाम्रा खाना उपयोगी छन् । २) को- रोना संक्रमणको उपचारमा मले-रियाको औषधि सफल रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । गुर्जो, हर्रो, अदुवा,हरियो धनियाँ, बेल आदि एन्टी मले-रियल हुन् ।
३) लसुन, कागती, मरिच, पुदिना, अदुवा, सख्खरखण्ड,प्याज, भुँइ अमला, दही आदि भाइरसको वृद्धि रोक्न उपयोगी हुन्छन । यी हाम्रो खानाका अभिन्न अंग हुन् । ४) नेपालमा घरभित्रभन्दा घरबाहिर बस्ने, खेल्ने प्रचलन धेरै छ | नेपालीहरु मौसम अनुसारको जाडो, गर्मी तथा बर्षासंग साक्षात्कार भएका हुन्छन्। घरलाई हिटिंग र कुलिंग गर्ने प्रचलन कमै छ । जाडोमा काम्दै हिंड्ने, गर्मीमा पसिना बगाउँदै हिंड्ने तथा बर्षामा भिज्दै हिंड्ने, हुरी चल्दा पनि हुरीसंगै हिंड्ने, धुलो/ धुँवालाई सहेर पचाउने लगायतको बानी छ ।
५) बिदेशमा घाँस पलाउने बेलामा, फूल फुल्ने मौसममा तथा पानी पर्ने समयमा अधिकांश मान्छेलाई घाँस, फूल, मौसम आदिको ए-लर्जी हुन्छ । तर नेपालीलाई प्राय हुँदैन । हामीले ती ए-लर्जी पचाएका हुन्छौं । ६) मौसमी रुघाखोकी, भाइरल इन्फ्लुएन्जा लगायतले विश्वका बार्षिक ४ लाख ५० हजार देखि ६ लाख व्यक्तिको मृ- त्यु हुन्छ । नेपालमा रुघाखोकीले खासै मृ- त्यु हुँदैन ।
७) रुघाखोकी लागेको बेला हामीहरुले आराम गर्ने चलन छैन न त उपचार गर्ने । हामीले घरेलु उपचारको रुपमा ज्वानो, बेसार, अदुवा, मरिच, ल्वांग, सुकमेल, कागती पानी पकाएर खान्छौं । कागतीक बोक्रा चपाउने गर्छौं, बोझो चुस्छौँ । ८) हामीले हावा, पानी, माटो, घाम, तातो, चिसोले उपचार गर्छौं, धेरैजसोले अनेक जडिबुटी चिनेका छौं । सकभर आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्छौं । सर्पले टो- के त झारले ठिक पार्छौं भने अरु साना रोगको के कुरा भो र?
९) नेपालको कुल परिप्रेक्ष्य हेर्ने हो भने साबुनपानीले मिचिमिची हात धुने चलन छैन भन्दा हुन्छ । आधि गिलास पानीले हात भिजाएर खाना खाने प्रचलन अझै छ । यसको मतलब हामीहरुले कि-टाणु पनि पचाएका हुन्छौं । १०) धामी, झाँक्री, जान्ने, लामा, गुरु आदिसंग फुकाउन जाने, खरानी पानी खाने, मन्त्र गरेको चामलका दाना खाने अनि ‘ अलि अथवा भएको छ ‘ भन्दै रोगलाई पेल्ने हाम्रो संस्कार छ ।
११) ज्वरो आयो भने चिराइतो, निम आदिको झोल खाने तर औषधि नखाने हाम्रो बानी छ । पखाला लाग्यो भने ज्वानो, बिरेनुन, आँपको बोक्रा, अनारक बोक्रा खाने हाम्रो बानी छ । जुनसुकै रोग लागेपनि २-४ गोली खाएर अलिकति लक्षण शान्त भएपछि औषधि नखाने हाम्रो बानी छ । जसले गर्दा औषधिको दुष्प्रभावबाट हामीहरु बचेका हुन्छौं, यद्यपी यो राम्रो प्राक्टिस हैन । सकि नसकी रोगसँग जु-ध्ने हाम्रो बानी छ ।
१२) फलफुल खाँदा आफुले लगाएको कपडामा पुछेर खाने बानी हाम्रो अधिकांश ठाउँमा छ । १३) हामीले सरकारले निशुल्क लगाउने आबश्यक/अनाबश्यक खोप लगाएका छौं, केहि नभएपनि जुकाको औषधि, हात्तीपाइलेको औषधि बाँढेको बेला खाएका छौं । तराइ क्षेत्रमा मले-रिया, काला-जार तथा सबै क्षेत्रमा डेंगुसंग बर्षेनी जुधेका छौं ।
१४) हामीले घरमा जे जस्तो छ ताजा खाना खान्छौं । बिहान पकाउने सागसब्जी बिहान टिप्ने, बेलुका पकाउने सागसब्जी बेलुका टिप्ने हाम्रो बानी छ । बासी खाए रोग लाग्छ भनेर हामीले सिकाइरहेका हुन्छौं । बाहिरको खाना खाने प्रचलन अत्यन्तै न्यून छ । १५) नचिनेको खाना तथा काँचो मासु खाने हाम्रो बानी छैन । त्यसैले नयाँ रोग लाग्ने जोखिम हुँदैन ।